IDRA-21 Powder Dosi, Hafu-hupenyu, Kubatsirwa, Mhedzisiro, uye Ongororo
Chii chinonzi IDRA-21 poda?
Izvo zvachose munhu kugara uchitsvaga chimwe chinhu chinogona kukupa iwe mupendero. Kuita zvirinani mashandiro emunhu, vazhinji vava kutendeukira kune akangwara madhiragi, ari nani kuzivikanwa se nootropics. Iwe pamwe wakasangana nezvakawanda zvinowedzera izvo zvinoti zvinowedzera kuita kwepfungwa asi wakamira kuti uzvibvunze kuti ndeipi inoshanda? IDRA-21 mushonga wakatorwa kubva kune benzothiadiazine kemikari chimiro. Kune zvirevo zvekuti IDRA-21 inoenderana neAniracetam, imwe nootropic iyo yakapetwa makumi matatu kupfuura IDRA-21. Iwe unozoona kuti IDRA-21 ndeye nootropic iyo inofamba hurukuro. Iyo imwe yeakanakisa ma nootropics anorongedza punchi kana zvasvika pakusimudzira ndangariro yako, kurudziro, kufunga maitiro, uye kugadzirisa kugadzirwa kwako. Icho chitsva mumusika, uye kutsvagurudza kuchiri kuenderera kuti unzwisise zvimwe pamusoro 22503-72-6 mhedzisiro mundangariro, kugona kwekuziva, uye kudzoreredza kwekukanganisa kwekuziva.
IDRA-21 inoshanda sei?
Semushonga weampakine, IDRA-21 inoshanda kuburikidza neakanaka allosteric modulation yeiyo glutamate AMPA receptors muuropi. Sezvo ma AMPA receptors anokonzeresa kukurumidza synaptic kutapurirana, pane kuwedzera kwesimba rekunakidza synaptic simba. Iyo inozivikanwa zvakare se allosteric activation.
Yakakurudzirwa Dosage / Kushandisa Instruction yeIDRA-21
Kunyangwe IDRA-21 yakangoongororwa pamhuka, vanhu vazhinji vakazvishandisa, uye vamwe vachiri pairi. Kuve yakakurumbira nootropic, vanhu vazhinji vakataura nezve yakanakisa dosage inopa yakanyanya mibairo. Vazhinji zvinyorwa zvinopa kuti IDRA-21 chiyero inofanirwa kusvika kusvika ku10mg mukati maawa makumi mana nemasere. Unogona kuitora kana imwe kana isati yambopedza kudya sezvo ichinyoroveswa nemvura uye inongoda girazi remvura kuti ipedze. Kana iri yako yekutanga kusangana neinootropic, zvinokurudzirwa kuti utange pane yakaderera IDRA-48 dosage. Iwe unogona ipapo kuwedzera icho zvishoma nezvishoma kana iwe uine chokwadi chekuti muviri wako haupindure zvisiri izvo nekushandiswa kwayo. IDRA-21 nootropic stack Kunze kwekuti iwe unogona kushandisa IDRA-21 iri yega, unogona kusarudza kuzvibatanidza nemamwe nootropics kana zvinowedzeredza kuti uwane mamwe mabhenefiti ekuziva. Nekuda kweinogona kuita excitotoxicity uye kushomeka kwekutsvaga kwakaringana, iwe unofanirwa kuenda unononoka pairi. Hatidi kukurudzira kuunganidzwa kweIDRA-21 nechero ipi ampakine zvinodhaka seAniracetam. Mamwe maootropics anowedzera iyo glutamate mazinga anofanirawo kudzivirirwa.
Ndezvipi zvakanakira IDRA-21?
Chero munhu anokurudzirwa anowedzera kubereka. Tora, semuenzaniso, kana iwe uine dhiriti yekuita zvakanakisa muzuva rako rezviitiko zvezuva nezuva, iwe kazhinji uchazadzisa zvinangwa zvako. Kune rimwe divi, kana iwe usina kana kurudziro yekuita chero chiitiko, unokuvadza tarisiro yekukura kwako. Imwe ye IDRA-21 mabhenefiti ndeyekuti inotungamira kukurudziro yekuvandudza iyo, inosimudzira kushanda zvakanaka uye inowedzera mukukwanisa. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kuzadzisa zvinangwa zvako nezvinangwa iwe pasina kunzwa sekuti uri kuzvimanikidza zvakanyanya.
Wedzera basa rakanyatso
Isu tese tinoziva kuti zvakakwana mhedzisiro zvinoda zvinopfuura kungoedza chete. Zvinorehwa izvi ndezvekuti iwe unogona kuisa mune zvako zvese asi ziva kuti hausi kuwana iko 100% kunyatsoita kwaungazoda kuzadzisa. Chinhu chakanaka chiri IDRA-21 powder inovimbisa iwe necentrese uye kutaridzika kwaunoda kuti uite chaizvo izvo mhinduro zvaunoda. Yakasanganiswa nebasa rakaoma, iwe unogona kuzorora uine chokwadi chekuti iwe uchave wakawedzera mwero wepamusoro wekukona.
Kuwedzera mundangariro pfupi
Sezvo iwe pazera iwe, iwe unozoona kuti yako pfupi pfupi yekuyeuka haisisiri yakasimba seyakange yave iri. Iwe unotanga kukanganwa kunyange zvinhu zviri pachena, uye kupikisa izvi, kugadzira mapfupi manotsi kana manotsi kunova shamwari yako. Kunyange iwe uchinzwa kunetseka kuti pfupi yako yekurangarira ingangodaro isingave yakafanana zvakare, hapana chikonzero chekuvhunduka. Izvo imhaka yekuti iwe unogona kuwedzera yako pfupi term memory chero nguva yaunoda. Kushandiswa kwe 22503-72-6 imwe yenzira dzinoshanda dzaungagona batana nenhamo yenguva pfupi yekurasikirwa nendangariro. Ndosaka ichishandiswa kurapa amnesia. Nekushandiswa kwayo, unogona kuyeuka zvaunoda kwauri muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Ine mamwe maitiro ekurapa pane kushungurudzika
Uri kusuwa, uchiramba uchinetseka, kana uine kushushikana? Chidyo chako chakaderedzwa here? Unonetseka kurara here? Kana mhinduro yako iri hongu, saka iwe unogona kunge uchitambura nekuora mwoyo. Sezvaungave uchiziva, kushungurudzika kunogona kukanganisa hupenyu hwako, kukuita kuti usasvike pakukwanisa kwako kuzere. Neraki, hazvisi zvakaoma kuzvikunda nekushandiswa kweIDRA-21. Nekupa uropi hwako kuwedzera simba, zvinogona kukubatsira kurwisa kushungurudzika. Zvakare, ine mushonga wekurapa unozoita kuti unzwe zvirinani chero nguva iwe unonzwa sekufunganya kuri kukambaira mukati.
Kuwedzera kwekutarisa kwepfungwa
Iko kugona kwekuterera kwenguva yakareba isina kukamurwa kwakakosha zvakanyanya kana iwe uchida kuita kwakanakisa. Kana iwe ukaona kuti yako yekurebesa span irikurova flabby, saka unogona kushandisa IDRA-21. Kubva kuIDRA-21 wongororo pamhepo, pane zvinotaurwa kuti zvinokubatsira kuramba uri pabasa uye nekuzvipa iyo kukoshesa kwakakodzera. Izvi zvinodaro nekuti zvinokubatsira iwe kutarisisa pfungwa kunyangwe nezvose zvinokanganisa kunze.
Kuwedzera kwekunzwisisa kwemunhu
Manzwiro ekufunga anogona kurondedzerwa sechipfungwa chechitanhatu chinofanirwa kuve nemunhu wese. Iko kugona kuona zvinhu uye kunzwisisa nyika dzakakukomberedza nenzira iri nani. IDRA-21 inotora pfungwa dzako dzekunzwa dzichiita kuti uve mupfupi.
Inobatsira mukurapa kwemamiriro akati wandei emitsipa
Nhasi, kushandiswa kweIDRA-21 kwave kuchiratidzwa mukurapa uye kuchengetedza kwevarwere vanotambura nemamiriro akati wandei eurouriki sekukwegura, kudzikira kwekuziva, chirwere cheAlzheimer, uye chirwere cheParkinson.
Kugona kwedu kwekuziva hakugadzirisike. Sezvo vanhu vazhinji vachifunga kuti majini edu anovasarudza, pane nzira dzaungakwanise kukwirisa kwakakwirira chunhu. IDRA-21 ndeimwe yemakoni ekuvandudza ayo anonongedza maererano nekuvandudza kweumwe munhu njere.
Mhedzisiro Mhedzisiro yeIDRA-21
Vanhu vazhinji vanotuka nezve uyu mushonga nekuti hauna mhedzisiro. Nemuripo wakakurudzirwa, iwe kazhinji ungasazo sangana neIDRA-21 mhedzisiro. Nekudaro, vamwe vanogona kusangana nemagadziro ane chekuita nekushandiswa kweanotropics kana ampakines. Zvakadaro IDRA-21 mhedzisiro inosanganisira;
Kuwedzera kwe glutamate neurotransication inowanzo kukonzera izvi IDRA-21 mhedzisiro. Kunyanya, izvi zvinoitika kune avo vane AMPA kuita kwakanyanya uye vasingade kushandisa IDRA-21. Iyo mhedzisiro haifanire, zvakadaro, kukuvhundutsa iwe; mushonga wacho une mukana wakawanda, uye mabhenefiti acho anopfuura iwo mhedzisiro. Iwe kazhinji ungasatombotambura kubva kune chero wavo, Kana iwe wakarwara nekurwara nesitiroko munguva yapfuura yapfuura, unofanirwa kudzivirira kushandisa mushonga uyu nekuti unozoita kuti mamiriro ako anyanye kuora.
Zvidzidzo / Tsvakurudzo paIDRA-21
Muzvidzidzo zvakapfuura zvakaitwa pane IDRA-21 simba uye nemabatiro ainoita pane AMPA. Iyo IDRA-21 yakaedzwa pamakonzo erabhoritari ayo aifanira kupfuura maze emvura. Izvo zvakaonekwa kuti makonzo anofambiswa ne IDRA-21 rakanyanya kuita zvirinani zvichienzaniswa neizvo zvisina. Vakaratidza izvi nekusvika maze kubuda kunze kwekutanga. Mhedzisiro yeIDRA-21 nehuperzine pane inozivikanwa yekuyeuka ndangariro mumacaque madiki yakashandiswawo kuyedza kushanda kwayo.
IDRA-21 poda Ongororo
Inowedzera kutarisa kwepfungwa uye kusangana Edwin R. anoti, "Iyi nootropic inorova zvimwe zvese zvinhu mukuchengetedza imwe pfungwa yakatarisa. Ini ndinogona kupupura kune izvi nekuti kubvira pandakatanga kuitora, ndakaona mutsauko mukuru munzira yandinodzidza nekushanda. Ini ndinoita zvakawanda kudzidza mushure mebasa, uye munguva yakapfuura, ndakanga ndisingakwanise kupa zvese kutarisisa kwakaringana. Ini ndaigara ndichitadza mune imwe, asi izvi handizvo zvazvino. Mukuru wangu webasa anondiudza kuti ndave kushanda nesimba nepo mudzidzisi wangu achiti ini ndave iye zvino mudzidzi ane tarisiro. Ini ndinodawo chokwadi chekuti kutora IDRA-21 kwakandinakira chaizvo sezvo ndichiitora chero nguva yezuva negirazi remvura. IDRA-21 ndizvo chaizvo zvandanga ndichitsvaga. ” Akandibatsira nekushushikana nyoro Essy J. anoti, “Nguva pfupi yadarika, ndanga ndichirwara-rwara nekuda kwebasa rangu rinotambudza, mucheche mutsva uye hupenyu hwese huri kundishungurudza. Ndakaedza zvinodhaka zvakati wandei, asi hapana chakaita senge chinoita kuti ndinzwe zvirinani. Neraki, shamwari yakakurudzira kuti ndaifanira Tenga IDRA-21 powder kuyedza kurwisa kushungurudzika uye kushungurudzika. Huye, anga achingova matatu chete mumushonga uyu, uye wakonzera mhedzisiro. Ini zvino ndogona kufunga zvakatwasuka zuva rese ndisina kutambura nekuchinja kwemood. Ndingazvirumbidza kune chero munhu anonzwa sekunge afa. ” Yakabatsira mwanasikana wangu kubata nekukanganwa William S. anoti, “Mwanasikana wangu ane ADHD yakakomba uye kuisa pfungwa kunyangwe kwemasekonzi mashanu ibasa. IDRA-21 poda yakave, zvisinei, yave iri yekuponesa kubva pakumisikidzwa kwayo kwanyanya. Iye zvakare anoyeuka zvimwe zvinhu kupfuura zvaaimboita, nekuda kwechigadzirwa ichi. Ndakaona zvakare kuti haina kana divi mhedzisiro paari, uye izvi zvinoita kuti itore zvimwe zvibodzwa. Ndinokutendai IDRA-21, mwana wangu ava kugona kurarama zvakajairika. ”
Sezvinoonekwa mune chinyorwa, IDRA-21 inokwanisa kupa hupenyu hwako shanduko yakazara. Zvimwe pane kukuita iwe uve unobudirira uye wakangwarira, IDRA-21 inogona kukuita iwe uve nehupenyu hunofadza. Ndinoziva iwe unogona ikozvino kushamisika kuti ungachiwana kupi. Imwe yematambudziko akakosha anotarisana nevanhu ndeyekuwana yakavimbika IDRA-21 sosi. Izvi zvinodaro nekuti chigadzirwa ichi zvachinja kuva chishoma chisingawanikwe tichifunga kuti ichiri muzvidzidzo zvayo zvekutanga zvekiriniki. Izvo hazvireve, zvakadaro, zvinoreva kuti haumbofa wakaisa maoko ako pahunhu IDRA-21. Unogona nguva dzose tenga IDRA-21 paIndaneti uye riise kunzvimbo yako. Izvi hazvisi kukununura iwe musoro wekutama kubva shopu kuenda kuchitoro uchibvunza nezvazvo? Isa odha nesu nhasi uye tanga rwendo rwako kune kukurudzira kukuru uye kushanda kwakanaka.
Kuziva Kukurudzira Zvinodhaka, zvakagadziriswa naJerry J. Buccafusco, peji 92-93
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, LLC Mabhuku, General Books LLC, 2010, peji 1-36
Hutano & Zvinodhaka: Chirwere, Chinyorwa & Mishonga, NaNicolae Sfetcu
1. Chii chinonzi IDRA-21 powder?
2. IDRA-21 inoshanda sei?
3.Yakakurudzirwa Dosi / Uchishandisa Kurairwa kweIDRA-21
4. Ndeapi mabhenefiti eIDRA-21?
5.Side Mhedzisiro yeIDRA-21
6.Studies / Tsvagiridzo pane IDRA-21
7.IDRA-21 poda Ongororo
8.Kupi kwekutenga IDRA-21 powder?